Onu Bearf OnPods, aka efu na nti efu | Akụkọ akụrụngwa
Onu Bearf OnPods, aka na aka na nti
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Ngwa, Foto na ụda
Taa na Actualidad Gadget anyị na-ekwu maka ya ngwaahịa nke na-erebeghị ere. Ọ dịghị ihe ọhụụ ma ọ bụrụ na anyị lelee ọnụọgụ na akụkọ banyere mmepe n'ọdịnihu na ahịa anyị na-enweta kwa ụbọchị. Ma nke a dị iche. Anyị ga-agwa gị ihe niile gbasara Onu Bearf OnPods, A oru ngo ka na mmepe na-adọ na jisiri ike ka uche anyị.
Ọ bụ ihe a echiche nke ezi wireless ụda wireless ekweisi na anyị na-ahụbeghị. Ihe mepụtara na stampụ Spanish na mkpọsa Crowfunding na-aga n'ihu nke na-ekwe nkwa inye ọtụtụ ihe iji kwuo maka mpaghara ọrụ a na-arụ ọrụ. Okwu ya na-eme ka o doo anya, aka adighi na nti adighi, onwere ike? ọ ga-ekwe omume. Anyị ahụla na a ka nwere ohere maka ihe ọhụụ ọbụlagodi n'echiche nke nke a yie ihe na-agaghị ekwe omume.
1 Bearf OnPods, ikekwe ihe mgbanwe mepụtara
2 Nụ egwu na ụda dị n’etiti gị ga-ekwe omume site na Bearf OnPods
3 Ọrụ ị nwere ike isonyere ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị
Bearf OnPods, ikekwe ihe mgbanwe mepụtara
Dị ka anyị na-atụ anya gị, naanị ya slogan akwa obi abụọ na-ama na-kere. Olee otu ọ ga - esi kwe omume nti ekwe-nti? Nke a ga-ekwe omume ekele maka usoro ịnụrụ ntị na-adabere na omume cartilage. N’eziokwu, mgbe anyị mụtachara gbasara ọrụ a, anyị kwesịrị ịghọta na ọ bụ ihe anyị na-anụtụbeghị mbụ ya. Enwere n'ahịa okpukpu isi-isi ekweisi uda. Usoro nke a na-ebute vibrations site na ọkpụkpụ, ma gafere etiti ntị, ha ruru ntị dị n'ime. Echiche nke yiri ka ọ nweghị ezigbo ihe ịga nke ọma.
Teknụzụ ndị Bearf OnPods a na-eji akpọrọ cartilaginous conduction na-akpata ụda vibrations na-aga site na cartilage na eardrum. Site na eutrum jikọtara ya na anụ anụ ma soro otu ụzọ ahụ. A priori, otu uru anyị hụrụ karịa ekweisi ọdịnala bụ Bear OnPods kpochapuchapu ahihia nti. Ya mere anyị nwere ike, mgbe anyị na-anụ ụtọ egwu anyị, ịnụ ụda n'èzí na nghota zuru oke.
Ajuju na-aga n'ihu ... ọ bụrụ na ntị enwere onwe ha Ebee ka anyị na-etinye Bearf OnPods? N'ebe a, anyị na-achọta akwụkwọ ọzọ. Anyị anaghị atụ anya na ekweisi ga-apụ na ntị. Ngwaọrụ ebe batrị, igwe okwu na mgbawa nnochi di dị n'azụ ntị, nke dị na cartilage. Na N'ime ime, naanị ebe ndọta magnet ga-adị bụ naanị ịchọta na mgbakwunye na ijide ngwaọrụ ahụ na-emezu ọrụ nke nnyefe nke vibrations uda.
Nụ egwu na ụda dị n’etiti gị ga-ekwe omume site na Bearf OnPods
Otu n'ime ọrụ ndị a chọrọ ka ọtụtụ na ikuku isi ụlọ ọrụ bụ mbelata mkpọtụ. Usoro nke site na iwepu hum kacha nta, maka ọtụtụ enweghi ike ịghọta, na-akagbu ụda ndị dị na mpụga. N'ihi ya, ọrụ nke mkpọtụ Mbelata ekweisi nwere ike itinye onwe gị na egwu gị. Ma onwere ndị na-achọghị ịmụrụ egwu ma kewapụ onwe ha iche kpamkpam ihe niile gbara ha gburugburu.
OnBods Bearf na-enye ihe enwere ike ịnụ ụtọ egwu kachasị amasị gị enweghị eriri ma ọ bụ agbụ. Ma n'otu oge ahụ inwe mkparịta ụka, gee ntị n'oké osimiri, ma ọ bụ chọpụta ma ọ bụrụ na mmadụ na-akpọ anyị n'okporo ámá. Ọzọkwa, emebe nke ekweisi ndị a na-eme ka o sie ike ịhụ na ị na-eyiri ha. Ilegide anya na onye yi ha, ị ga-ahụ na ha eyighị ihe ọ bụla n'ime ntị ha, na obere magnet fọrọ nke nta ka ọ zoo na cartilage.
Otu n'ime uru dị iche iche nke Bearf OnPods nyere dị ka anyị siri kwuo, nke ahụ ha nwere ọgụgụ isi karịa. Ha na-ahapụkwa mekwaa t'ọ bụru ngwẹja-nri ya mere, anyị nwere ike ịnụ ihe niile na-eme na gburugburu ebe obibi anyị. Anaghị eme ka ntị ghara imebi ma ọ bụ bute ọrịa maka inwe ihe na nti. Ọzọkwa, nnyefe nke ịma jijiji kpọmkwem site na cartilage na na ntị na-eme ka bass nwee mmetụta nke ọma karịa na ot ekweisi.
Ọrụ ị nwere ike isonyere ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị
Dị ka anyị kwuru ná mmalite, anyị na-eche ihu oru ngo na mmepe. Dị ka ndị na-emepụta ya si kwuo, mgbe ọtụtụ prototypes gasịrị, ngwaahịa a dị ezigbo nso ịnweta ụdị ikpeazụ iji mepụta ya. Iji mee nke a, a crowinging mkpọsa nke ọ bụrụ na ị bịa iwere ya dị ka ọrụ na-atọ ụtọ yana ọdịnihu, ị nwere ike isonye na onyinye. Anyị amaghị ma nke a, ka bụ prototype, ga-abụ ihe atụ enwere ike zụta n'ụlọ ahịa ọ bụla. Ma ya onwe ya echiche a bu ihe mbu.
Enwere uru nke Bearf OnPods nwere ihe ọ bụla ọzọ site n'ahịa, ọ dịkarịa ala maka ugbu a. Ma ọ bụ ihe ahụDika iwu ahia uzo Spanish di ugbu a, amachibidoro ịkwọ ụgbọala ma jiri ya. Iwu ahụ machibidoro iji ngwaọrụ ọ bụla na-etinye ma ọ bụ kpuchie ntị. Ya mere, Ngwa ọdịyo bụ kpam kpam na mpụga ntị na-ahapụ ụzọ mbata n'efu adịghị n'etiti ndị anyị na-enweghị ike iji mgbe anyị na-akwọ ụgbọala.
Igwe okwu Bearf OnPods na-enye Njikọ Bluetooth TWS na dakọtara na ngwaọrụ ọ bụla. Agbanyeghị na foto ahụ, etinyere na azụ ntị nwere ike ịpụta ntakịrị, ibu ya bụ naanị gram 5. Ha nwekwara ikike nke na ụdị kachasị ọhụrụ nke ngosi ahụ ruru ihe ruru 63 dB. Omume zuru oke iji nwee ike ịnye ahụmịhe na-ege ntị na-enweghị aka. Ọtụtụ ga-adabere na ihe ịga nke ọma ya na njedebe ikpeazụ nke ngwaahịa ahụ ruru mgbe ọ na-ere ya, ka o wee nwee ike ịsọ mpi na ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ.
Site na Actualidad Gadget anyị chọrọ ịkwado ihe igba «mere na Spain»Kedu nke, na mgbakwunye na nke na-atọ ụtọ, nwere ụzọ ọ ga-esi bụrụ eziokwu n'oge na-adịghị anya. A na-anabata nyocha, evolushọn na ihe ọhụrụ n'ọhịa nke teknụzụ. O yikarịrị ka ọ ga - abụ n'oge na - adịghị anya, anyị ga - enwe igweisi olu na - eduzi cartilage na ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Onu Bearf OnPods, aka na aka na nti
Regulationskpụrụ iwu okporo ụzọ dịka ị na-akpọ ya, bụ ụkpụrụ izugbe nke okporo ụzọ 1428/2003 na na edemede ya 18 na-eme ka o doo anya, "amachibidoro ịkwọ ụgbọala ma jiri HELMETS MA Ọ bụ isi mkpuchi ejikọrọ na ndị nnata ma ọ bụ ndị na-emegharị ụda." Ọ na-ebu ntaramahụhụ nke euro 200 na nkwụsị nke isi 3 site na ikike ịkwọ ụgbọala. Gosi ya ma lelee usoro ozo.
Ndewo, Abụ m Rubén López, onye mepụtara ngwaahịa a, daalụ maka okwu gị. N'ezie ị ziri ezi ka ha gbanwere ụkpụrụ ka ị ghara ịnwe iji naanị otu n'ime ngwaọrụ ndị a. Agbanyeghị, enwere ụfọdụ dị iche iche dịka LG Tone Ultra, nke na-egbochi igbochi ntị ntị ka DGT nyere ikike (ha bụ ọkà okwu n'olu). Dịka ị pụrụ ịhụ na weebụsaịtị m na njikọta igwe mmadụ, anaghị m egosi na ha kwesịrị ịkwọ ụgbọala na Spain, ikekwe ọ bụrụ na mba ndị ọzọ ebe ọ bụ na ha anaghị egbochi ihe ọ bụla maka ya. Agbanyeghị ekwenyere m na onye ọ bụla na-eji ha na ha nwere ike mezuo ihe achọrọ iji chụpụ na m na-achọ ime nke a. Echiche kacha mma.
Zaghachi Rubén López
Samsung Galaxy Note 10 Lite dị ugbu a na Spain: ọnụahịa, nkọwa na nyocha nke usoro ndị ọzọ
Na Instagram ha na-arụsi ọrụ ike ịmalite ụdị iPad